Farmaajo oo Ku Hungoo- bay ganacsadada Beeshiisa Ee Nairobi WARBIXIN DHAB AH - Shaaciye.com
Farmaajo oo Ku Hungoo- bay ganacsadada Beeshiisa Ee Nairobi WARBIXIN DHAB AH 05/07/2012 .
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra,usulwasarahi hore Soomaaliya, ayaa ku guul dareestay dhaqlaale uu waydiisatay beesha uu ka dhashay ee mareexan ka dib markii shir isugu yeeray jaaliyada beeshaasi ee ganacsiyada ku leh Magaalada Nairobi.
Farmaajo ayaa waydiistay in aay beeshiisa ku garab istaagan dhaqaalo uu dorashada bisha agost ka dhacaysa ugu qeeb gali lahaa balse waxaa is hor is taagay qaar ka mid ah ganacsata beesha oo sheegay in aysan awoodin in aay waqtiga haatan la joogo aysan ku baxi karin dhaqaale siyasada Soomaliya.
Beesha waxaa aay u baahan tahay hurumar iyo in aay dhismooyin garoomaha deeganada dhaqaalo ku bixiso iyo dhisida cisbitaalo ee ma ahan munasab in siyasada dhaqaalo lagu bixiyo sidaasi waxa yiri wax garadka beesha oo isku duuban.
Farmaajo ayaa waxaa uu malmahan Magaalada Nairobi u joogay sidii dhaqaale u ugu qeeb galo dorashada agost ugu heli beeshiisa balse waxaa aay u muuqata mid uu ku hungoobay.
Waxaa ay aheed Xaflada Munasabada Kowda Luuliyo ee ka dhacaysay Xaafada Islii in aay u suurta gali waysay in uu si waafa ah ugu qeeb qaato ka dib markiiloo ogolaaday inuu ka hadlo kala tagi iyo gunaanadki xaflada oo ku beegneed 12.30 sacada geeska afrika iyadoo dad badana ay daraadiis goobta uga kala yaaceen xiligaasi oo aay xaflada iskuugu soo hareen dad fara ku tiris ah.
Dadka wax saadaliya ayaa sheegaya in uu Farmaajo suurta gal tahay in uu ka tanasulo Musharax nimada lagu wada agost in lagu qabto Soomaliya.